Garoonkii ugu horreeyay caalamka oo isaga oo idil Alwaax ka sameysan oo la soo bandhigay – Gool FM
(London), 04 Nof 2016 –Garoonkii ugu horreeyay abid Caalamka oo isaga oo dhan ka sameysan Alwaax ayaa waxaa naqshaddiisa soo bandhigtay isla markaana dhisanaysa kooxda Forest Green Rovers oo ka ciyaarta Horyaalka Heerka 5′ ee Ingiriiska.
Shirkadda ‘Zaha Hadid’ ee ay leedahay Haweeneyda asalkeeda Ciraaq u dhalatay balse haysata Jinsiyadda British, Zaha Hadid ayaa qaadatay qandaraaska dhismaha garoonkan 5,000 taageere qaada ee isaga oo dhan lagu gadaamay Alwaaxa.
“Arrinta xiisaha leh waxay tahay in garoonkani gebi ahaantiisaba laga sameynayo Alwaax, waana markii ugu horreysay ee meel dunida ka tirsan garoonkan oo idil laga sameeyo” ayuu yiri Guddoomiyaha Forest Green Rovers, Dale Vince.
Zaha Hadid waa Naagta keliya Adduunka ee haysata Abaalmarinta Dhismaha ee ‘Pritzker Architecture Prize’ oo la siiyay sanadkii 2004, waxaana dunida meelo badan ay ka soo naqshadeysay dhismayaal aad u qurux badan.
Barcelona maxay u guuleysan la'dahay Iniesta la'aantiis?